Ampiharo automatique lasy 1-singa amin'ny mpihazona varavarankely fiara
by Delta Engineering / Talata 20 Janoary 2015 / Published in mandeha ho azy
Ny DHA100 dia namboarina manokana mba hampihatra laka-pahatongavana haingam-pandeha ambony ho an'ireo mihazona ny varavarankely fiara. Ny mpihazona dia singa plastika izay napetraka hatramin'ny farany ambany amin'ny varavarankely fiara an'ny sisin'ny herinaratra. Izy ireo dia mampifandray ny varavarankely amin'ny moto kely mahatonga ny fikandrana hiakatra ambony sy ambany.
Io fametrahana io, miaraka amina rafitra dosa tsotra, miantoka ny fampiharana ny habaka voatifitra miverimberina, miaro ny dingana fanadiovana fanampiny hanesorana ny lakaoly be loatra. Ireo mpihazona dia azo apetraka mivantana eo am-baravarankely aorian'ny fampiharana ny lakaoly.
▼mandeha ho azy